Zimbabwe: Activist Makes New Bail Application - allAfrica.com
Zimbabwe: Activist Makes New Bail Application
Human rights programme manager Leo Chamahwinya who is facing charges of "publishing or communicating falsehoods" together with his three colleagues has applied for a new bail application just after his co-accused received bail.
Zimbabwe: Zimright Manager Makes Fresh Bail Application
Zimbabwe Human Rights programme manager Leo Chamahwinya, accused of tampering with the voters' roll, yesterday made a fresh bail application citing changed circumstances.… Read more »
Zimbabwe Human Rights director Okay Machisa, accused of tampering with the voters' roll, was yesterday granted US$500 bail. Machisa, who is being charged with forgery and… Read more »
File Photo:Zimbabwean Police
Zimbabwe: Zimrights Boss Granted Bail
SW Radio, 29 January 2013
The director of the Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights), Okay Machisa, was finally granted US$500 bail on Tuesday by High Court judge justice Felistus Chatukuta, on… Read more »
A leading human rights activist in Zimbabwe was denied bail today following his arrest earlier this week as part of what Amnesty International said is an ongoing crackdown on… Read more »
Zimbabwe: Activist Detained for 16 Days
OSISA, 16 January 2013
President Robert Mugabe's election campaign in Zimbabwe has begun in earnest. Not with the launch of a new manifesto or the erection of massive new billboards trumpeting ZANU PF's… Read more »
ZimRights director Okay Machisa appeared in court on Tuesday, facing charges of conspiracy to commit fraud. Read more »
Zimbabwe: Police Arrest Rights Activist
ZimRights director Okay Machisa was on Monday arrested and charged by the police in Harare for allegedly conspiring to 'commit voter registration fraud and publishing or… Read more »
Blog: Kubatana Zimbabwe Blog, Tue 15 Jan, 06:37 am 2013
Zimbabwe government continues harassment of NGOs. The new year hasn't brought a new attitude to the Zimbabwe government about human rights and freedom ... read more »